မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာဘက်ကလည်း ဥပဒေကြောင်းအရ ပြန်ပြီးခုခံဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲလ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးရှိတဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ကိုသွားပြီး တရားရင်ဆိုင်မှာပါ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာ ICJ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ၊ တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကရော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ ဆိုတာကို RFA ဝိုင်းတော်သူ မနန္ဒာချမ်းက တင်ပြထားပါတယ်။
(ရိုက်ကူး - ခေမဏီဝင်း၊ သီဟထွန်း၊ သက်စုအောင်၊ စောဖိုးခွား)
Long term solution may lie in
1. Bangladesh population control.
2. Keeping peace and stability within Bangladesh to avoid spill over effect as in the days of it's split from Pakistan.
3.Continue to accept more returnees who identify themselves as Myanmar citizens/ loyalists.
4.Myanmar to prepare for future challenges by building reserve and national guards, both sexes 18-40. Continue to make quality hard ware for Myanmar use and Myanmar market. Most , perhaps all threats will melt away, both internal and external. Hurry Up!
Dec 07, 2019 03:15 AM